Shiinaha Rubber dahaarka koorta daabacan warshad rullaluistemadka iyo saarayaasha | Yuantuo
Qoondaynta sariirta Waxa loo qaybin karaa sariirro waraaqo sameeya, sariirro daabacan, sariirro wax lagu daabaco, sariirto lagu rido bariis, sariiraha metalliga iyo sariirta daabacaadda ee saliidda; Marka loo eego qaab-dhismeedka dusha sare, waxaa loo qaybin karaa rullaluistemadka fidsan iyo rullaluistemadka naqshada leh; Marka loo eego maaddada waxaa loo qaybin karaa: sariirrada butyl, sariirrada nitrile, sariirta polyurethane iyo sariirta caagga ah ee silikoon. Sariirtu guud ahaan waxay ka kooban yihiin lakabka caagga ah ee dibadda, lakabka adag ee adag, xudunta birta, qoorta duudduuban iyo hawo-mareenka. Hawlgalkeeda inc ...
Qoondaynta sariirta carruurta
Waxaa loo qaybin karaa sariirro warqado sameys ah, sariirro daabacan, sariirro daabacan, sariirro lagu rido bariis, sariirro metallilis iyo sariiro daabacan oo saliid ah;
Marka loo eego qaab-dhismeedka dusha sare, waxaa loo qaybin karaa rullaluistemadka fidsan iyo rullaluistemadka naqshada leh;
Marka loo eego maaddada waxaa loo qaybin karaa: sariirrada butyl, sariirrada nitrile, sariirta polyurethane iyo sariirta caagga ah ee silikoon.
Sariirtu guud ahaan waxay ka kooban yihiin lakabka caagga ah ee dibadda, lakabka adag ee adag, xudunta birta, qoorta duudduuban iyo hawo-mareenka. Hawlgalkeeda waxaa ka mid ah ciida cufka ee udub-dhexaadka duubista, daaweynta isku-xidhka, sameynta isku-dhafka, duubista dharka, siligga wareejinta, daaweynta haanta foosha iyo dusha sare. Sariirta waxaa badanaa loo isticmaalaa sameynta waraaqaha, daabacaadda iyo dheeh, daabacaadda, ka samaynta hadhuudhka, metallurgy, processing caag, iwm.
* Sariirta sariirta ee daabacaadda saxaafadda ayaa inta badan lagu wareejiyaa khad. Sidaa darteed, sariirta nadiifinta ee maalinlaha ah waa in si taxaddar leh loo nadiifiyaa, haddii kale sariirta dusha sare iyo midabka, cusbada si fudud loogu qalajiyo si ay u sameyso filim siman oo adag, taasoo ka dhalata dusha sare ee sheyga oo saameyn ku leh wareejinta khadadka. Haddii aan si joogto ah loo nadiifin, dusha sare ee COTS-ka ayaa sinnaan doonin muddo dheer, taas oo saameyn ku yeelan doonta isticmaalka. Sidaa darteed, sariirta waa in la nadiifiyaa oo meel la dhigaa marka mashiinka la joojiyo.
* Hawlgalkii daabacaadda dheellitirka, sababo la xiriira "biyo weyn oo weyn" emulsification, sariirta siman ee sameynta saldhigga hydrophilic, ka dhig mid liita. Xalku waa in laga fogeeyo khadkan emulsified, lagu dhaqo sariirta jilicsan baatroolka, laguna shiido 5% sodium hydroxide solution iyo budada pumice, laguna daaweeyo biraha duubka ah (ama duubka adag) si waafaqsan. Duub adag sidoo kale wuxuu ku jiri karaa xaalada biyo rushaynta, oo leh biyo fiican oo shiidaya, fiiro gaar ah u leh inaadan ku joogin isla goobta, haddii kale waxay dhaawici doontaa sariirta. Habka aasaasiga ah waa in la xakameeyo qiimaha pH ee dareeraha baaldiga oo shaqo fiican oo dheelitirka khadku qabto.
* Sariirrooyinka waxaa la isticmaalay gabow aad u dheer, oo ay weheliso nabaad-guur kiimiko ah, taasoo ka dhalata xabagta qurmay ee "slag", sariirta noocaas ah ma isticmaalaan, ama si ba'an ayay u saameeyaan tayada daabacaadda.
* Si loo hubiyo in tayada wax soosaarka iyo daabacaadda aysan saameyn, waxaa jira roolayaal khad dheeri ah, laakiin ha keydin wax badan si looga fogaado gabowga. Deegaanka keydinta ee COTS wuxuu la mid yahay buste. Intaas waxaa sii dheer, sariirtu waa inay ku jiraan qaab toosan oo joornaalka ka mid ah, oo dusha sare yaanay is xiriirin ama walxo kale, si looga fogaado in sariirtu is beddesho.
* Sariirta yaan lagu keydin agagaarka matoorada waaweyn iyo matoorrada. Sababtoo ah in badan oo ozone ah oo ay soo saaraan qalabkani waxay ka dhigi doonaan dusha sare ee COTS gabowga iyo dildilaaca.
* Marka cimiladu qabowdo, khadku sinnayn, waxaad ku dari kartaa agabyada kaabayaasha ah khadka si habboon. Waa mamnuuc in lagu kariyo sariirta dharka leh kuleyliyaha infrared iyo qalab kale si looga hortago sariirta in oksaydh la sameeyo.
Hore: Rullaluistemadka koorta la jeexjeexay
Xiga: Ahama rullaluistemadka koorta ahama